Radio Don Bosco - Mizotra mankany amin’ny taom-pahasoavana faha-150
Taona telo no hiarahanay miaina ny fahasoavana sy ny fihavaozana:
2019, manomana ny fivoriam-be maneran-tany (CG) faha-XXIV izahay;
2020, mankalaza ny taon-jobily
2021, miaina izany any amin’ny ankohonam-piainana
Manasa anay haka ainga vao io CG amin’ny 2020 io, eo am-piainana ilay lohahevitra naroson’ny Fikambanana hoe : “ ankohonam-piainana mampita aina eo anivon’izao vanim-potoana izao”, “Ataovy izay holazainy aminareo”
Efa nodinihina tao amin’ny fivoriam-be-paritra faha-IV (CP), ny 29 aogositra ka hatramin’ny 01 septambra 2019 tao Ivato.Masera miisa 26 sy laika 14 no nanao ny “andram-piainana tao Cana”, nandritra io efatra andro io: niaina izany tao anatin’ny vavaka, ny fandalinana, ny fifampihainoana, ny fifampizarana, ny fanamarinana ary ny fikarohana ny lalana vaovao.
Ny mpandray anjara rehetra dia maniry ny hikatsaka ny lalana tsara ho an’ny faritra misy anay, sy ny fiaraha-miasa ary ny iraka, indrindra fa ny fiaraha mizotra amin’ny tanora ho amin’ny fahamasinana. Misaotra an’Andriamanitra izay mampiombona anay izahay, sy nanampy anay nandritra io fihaonana io. Mbola tsy mitsahatra ny midera Azy izahay noho ny soa sesehena nomeny ny faritra tamin’ny alalan’i Masina Maria mpanompovaviny.
Afaka niaina indray sy nandalina ny fanasana tao Kanà izahay: “Tsy manan-divay izy ireo”, hoy i Maria tamin’i Jesoa: mitalaho amin’ny zanany ho antsika i Maria; mahalala ny filantsika i Maria, ary liana amin’ny andavanandrom-piainantsika. Irintsika tsy ho banga amin’ny fiainantsika ilay divay tsara tao Kanà. Eo mandrakariva ny Tompo hanampy anay amin’ny alalan’ny vavaky ny Reniny. “Ataovy izay rehetra holazainy aminareo”, atefany aminay indray izany teny izany, izahay rehetra izay samy mpanompo. Manentana anay izy mba handray ny andraikitra andavananadro amin-kafaliana.
Nankahery anay hiroso lalina kokoa i P ; Charles Armand Randimbisoa, Lehiben’ny Fikambanana sdb tamin’ny Eokaristia masina fanoakafana ny CP, naniry izy ny hoe : “ Raha samy manana rano ianareo rehetra, miaraka amin’ny fanampian’i Maria, ny Fanahy masina no hanova izany ho divay, divay vaovao izay ho entinareo ho an’ny olon-drehetra, indrindra ny tanora faraidiny izay miandry ny fisehoan’ny fitiavan’Andriamanitra avy aminareo”.
Mankasitraka ireo mpandray anjara rehetra, indrindra an’i Sr Bernadette Chongo Cola, Lehiben’ny Fikambananan’ny masera FMA eto amin’ny faritra “Maria loharanon’ny aina”, tamin’ny fanentanana nandritra ny fihaonana (CP) sy ny teny fankaherezana mamy nataony ho an’ny hoavin’ny faritra. Mankasitra indrindra ny ankohonam-panabeazana tao Ivato tamin’ny fandraisana sy ny fikarakarana, misaotra ireo olona rehetra nandray anjara tamin’ny fanatontosana iny fivoriana iny. Maria renintsika anie hanampy antsika hihaino izay lazain’i Jesoa, mba hanova ny ranon’ny andavanandrom-piainantsika ho divay ho fahombiazana vaovao amin’ny asa pastoraly sy iraka ataontsika.
Mirary soa ny rehetra amin’ny asa pastoraly atao amin’ity taona ity !
Biraon’ny Fifandraisan’ny mpiara-belona !
Nandika tamin’ny fiteny malagasy : Ratovoarivelo Ndrasantsoa Marie Frédeline